Indlu Yokuqasha E-Marathahalli, Bangalore
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Karnataka » Bangalore » Marathahalli » Indlu Yokuqasha E-Marathahalli, Bangalore1
India, Karnataka, Bangalore, Marathahalli
Usayizi waphansi: 1500 Sq feet
Ifulethi elihlelwe kahle i-3 bhk multistorey liyatholakala endaweni ephambili eMarathahalli. Inendawo engu-1500 sqft futhi iyatholakala ngokuqasha ama-Rs. 39,000. Indlu inefenisha encane. Kusempumalanga ebheke impahla. Le ndawo yokuhlala isilungele ukungena. Kwenziwa ngendlela yokunikeza impilo enethezekile. Umphakathi uxhunywe kahle izindlela ezahlukahlukene zokuhamba. Sicela uxhumane neminye imininingwane.
Xhumana nomkhangisi 186746xxxx
IMarathahalli ingesinye sezindawo ezithandwayo eBashington futhi yaqanjwa ngegama lendiza eyayihlaselwe okwakuthiwa nguMarut eyayinengozi kulesi sigatshana. Le ndawo isishintshe ngokushesha yaba ilokishi elizimele nelikhulayo. Lokhu kufakazelwa kakhulu ukwanda kwemikhakha ye-IT ne-ITeS nokusondela kwayo ezindaweni ezibalulekile njenge-HAL Airport, iSarjapur, i-Electronic City neWhitefield. Ukuxhumana Indawo yendawo inomgwaqo omuhle nenethiwekhi yezithuthi zomphakathi. Idolobha laseBakashe lisendaweni eqhele ngamakhilomitha angama-20 ukusuka kule ndawo ngenkathi iDomlur, Koramangala neBelandur zonke zixhunyaniswe kahle nayo. Indawo le iyikhaya lenethiwekhi yebhasi leBMTC elinokwethenjelwa eliyixhumanisa cishe nazo zonke izingxenye zeBurkey nge-aplomb. Ujantshi oyi-6 onguthelawayeka phezu kwebhuloho eliseduze neJunction uxhuma umgwaqo uHAL Airport Road uye eKundalahalli. Iziteshi zikaloliwe zaseCarmelaram naseWhitefield zitholakala kalula ukusuka endaweni. Izindiza zezindiza ezintsha nezindala zamazwe omhlaba nazo zixhunyaniswe kahle neMaratha. ITheknoloji Park isebangeni elingamakhilomitha ayi-5 ukusuka kuyo kanti amahhovisi ezinkampani ezihola njengeJP Morgan neWipro nawo axhunyiwe kuwo. Isidingo Sokuthengiswa Kwempahla yendawo yokuhlala neyokuhweba eMarathahalli sikhuthaze onjiniyela abaningi abaholayo ukuthi beze namaphrojekthi ahlukahlukene lapha. Le ndawo inikeza ukufinyelela kwengqalasizinda enhle futhi ithuthukise izinsizakalo zomphakathi ezenze kwaba indawo efiselekayo yokuhlala eBashington. Ingqalasizinda Yomphakathi Le ndawo futhi iyikhaya lezitolo ezinkulu ezinkulu zokuthenga, izitolo ezinkulu, izitolo zezindwangu kanye ne-Innovative multiplex okwakungeyona mpahla yokuqala enjalo eBashington. Amanye amahhotela aholayo lapha abandakanya i-The Orange Hotel, iPark Plaza, iGrand Homes, iHhotela i-Dolphin, i-Spree Hotels kanye ne-Country Club International. Le ndawo ibuye ibe nezibhedlela eziningi ezidumile kanye nezikhungo zemfundo kubandakanya iSikkim Manipal University, SJR Polytechnic, Campus Yezingane, i-Navaparjana Public School neSunKids Play School. Izibhedlela eziholayo zihlanganisa isibhedlela iJeevika, isibhedlela i-Akshay Mallya, Vasan Eye Care Hospital kanye neYashomati Hospitals Pvt Ltd. Izinkampani eziningi ze-IT nazo ziyahluma kule ndawo ezinyangeni ezedlule.